'शेयर बेच्दा यी कुरामा ध्यानदिनुहोस्'
‘शेयर बेच्दा यी कुरामा ध्यानदिनुहोस्’
काठमाडौं। अहिले लगानीकर्ताको क्लोजआउटमा पर्ने समस्यासम्बन्धी गुनासोहरू हरेक दिन सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन्। अझ समयमै ईडीआईएस नगर्दा वा मेरो शेयरमा आएको समस्याले ईडीआईएस गर्न नपाएर जरिमाना तिर्ने लगानीकर्ता थुप्रै छन्। यसरी जरिमानामा पर्ने लगानीकर्ता विशेषगरी दुई प्रकारका हुन्छन्:
१. ईडीआईएस भनेको नबुझेर, २. सही ढंगले सही समयमा ईडीआईएस गर्न नजानेर
त्यसैले आज हामीले ईडीआईएस भनेको के हो र यो कसरी गरिन्छ ? ईडीआईएस गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? मेरो शेयरको समस्याले ईडीआईएस गर्न नसक्दा क्लोजआउट पर्नबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा यहाँलाई बताउँदै छौं।
ईडीआईएस भनको के हो ?
सुरुमा ईडीआईएसको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो मेरो शेयर पोर्टलमा रहेको एउटा फिचर हो। जहाँबाट तपाईंले शेयर बेचेपछि आफ्नो खातामा रहेको सो शेयर ब्रोकरलाई खरिदकर्ताको खातामा पठाउन दिने अनुमति हो। यसलाई इलेक्ट्रोनिक्स डिपोजिट इन्स्ट्रक्टर स्लिप भनिन्छ।
पहिले ब्रोकरकोमा गएर यो फर्म भरेपछि मात्र शेयर खरिदबिक्री हुन्थ्यो भने अहिले अनलाइनबाट नै आफैँले गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईंले टीएमएसबाट शेयर बेच्नुभयो र डब्लूडब्लूसी पनि गरिसक्नुभएको छ भने मेरो शेयरमा गएर माई ईडीआईएस मेनुमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईंले दुईवटा अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यहाँ ट्रान्सफर शेयर मेनुमा क्लिक गर्नुस्।
यति गरेपछि तपाईंले बिक्री गरेको कारोबारको विवरण यसमा पाउनुहुनेछन्। सो विवरण हेर्नका लागि आफूले कारोबार गरेको दिनका लागि तोकिएको फर्छ्योट नम्बर (सेटलमेन्ट आईडी) छनोट गरी भ्यु डिटेलमा क्लिक गर्नुस्। तपाईंले छनोट गरेको आईडी नम्बरअन्तर्गत सम्पूर्ण कारोबारहरूको विवरण यहाँ उपलब्ध हुन्छ।
धितोपत्रको कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्योट प्रयोजनका लागि क्लाइन्ट म्यापिङ गराउँदा तपाईंले आफ्नो राफसाफ सदस्यलाई प्रदान गरेको डिम्याट खाताको मेरो शेयर अकाउन्टमार्फत मात्र तपाईंले यो सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंले छनोट गर्नुभएको फर्छ्योटअन्तर्गतको सम्पूर्ण कारोबार वा चाहेअनुसार एक वा एकभन्दा बढी कारोबारका लागि एकै पटकमा निर्देशन प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। सोका लागि कारोबार नम्बरको अगाडि देखाइएको चेक बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र प्रोसिड नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुस्।
यसरी निर्देशन प्रदान गर्दा तपाईंले आफ्नो हितग्राही खातामा फ्रि ब्यालेन्सको रूपमा रहेको संख्याभन्दा बढी निर्देशन प्रदान गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंले बिक्री गरेको धितोपत्रभन्दा कम संख्यामा धितोपत्र मौज्दात रहेको खण्डमा तपाईंले आंशिक रूपमा धितोपत्रको राफसाफका लागि निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। सोका लागि कारोबार नम्बरअगाडिको चेक बक्समा क्लिक गरिसकेपछि क्वान्टिटी टु बी डेलिभर उल्लेख गरिएको कोलममा आफूले राफसाफका लागि निर्देशन दिन चाहेको संख्या उल्लेख गरी प्रोसिड बटनमा थिच्नुपर्छ।
तपाईंले राफसाफका लागि निर्देशन दिन चाहेको धितोपत्रको बिक्री कारोबारका लागि तपाईं स्वयम्‌ले बिक्री आदेश दिएको र सोको राफसाफका लागि यो निर्देशन दिन तपाईं मन्जुर रहेको कुरामा सहमति जनाउन कन्फर्म बटममा थिच्नुपर्छ।
तपाईंले प्रदान गर्नुभएको निर्देशन तपाईंको खातामा रहेको निक्षेप सदस्यलाई प्राप्त हुन्छ। अब तपाईंले आफ्नो निर्देशनको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्नका लागि ट्रान्सफर रिक्वेस्ट रिपोर्ट मेनुमा क्लिक गर्नुपर्छ। तपाईंले प्रदान गर्नुभएको निर्देशनको कार्यान्वयनको स्थिति सो रिपोर्टमा उल्लेख हुन्छ।
क्लोजआउटमा पर्नबाट कसरी बच्ने ?
ईडीआईएसअगाडि तपाईंले बेच्नुभएको शेयरको डब्लूएसीसी गर्नुपर्छ। शेयर बेच्नुभएको दुई कार्य दिनभित्रै ईडीआईएस गर्नुपर्छ। यदि समयभित्र ईडीआईएस गर्नुभएन भने तपाईं क्लोजआउटमा पर्नुहुन्छ।
अहिले मेरो शेयरमा निकै समस्या छ। तपाईं यदि मेरो शेयरको समस्याले ईडीआईएस गर्न पाउनु भएन भने पनि क्लोज आउटमा पर्नुहुन्छ नै। तसर्थ दुई दिन भनेर अन्तिम दिनलाई पर्खनु भनेको जरिवाना तिर्न उत्सुक हुनु नै हो।
यसरी क्लोजआउटमा परिहालेको अवस्थामा भने तपाईंले बेचेको शेयरको २० प्रतिशत रकम जरिवानाबापत तिर्नुपर्छ। तसर्थ, तपाईले शेयर बेचेको दिन नै ईडीआईएस गरिहाल्नुभयो भने क्लोजआउटमा पर्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ शेयर बेचेपछि पनि ईडीआईएस मेनुमा ट्रान्सफर शेयर देखाउँदैन। यो समस्या अधिकांशले भोग्दै आएको समस्या हो। यस्तो समस्या भएमा अर्को दिनसम्म पर्खनुपर्छ।
यस्तो समस्या ब्रोकरले इन्ट्री नगर्दा र पहिलो पटक बेच्दै हुनुहुन्छ भने ब्रोकरले तपाईंको डिम्याट एकाउन्ट क्लाइन्ट म्याप नगर्दा हुन्छ। त्यसैले समस्या आएमा तत्काल ब्रोकरलाई फोन गरेर सामाधानका लागि आग्रह गर्नुस्।